Ho fahatsiarovana an'i Gordon "Butch" Stewart, Sandals Resorts
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Ho fahatsiarovana an'i Stewart Gordon "Butch", Sandals Resorts
Misaona ny minisitry ny fizahantany noho ny fandalovan'ny sary fizahantany Gordon 'Butch' Stewart
Misaona ny fahafatesan'ny Gordon “Butch” Stewart ny World Tourism Network, mpizaha tany fizahantany ary mpanorina ny Sandals Resorts dia maherifo iray avy any Jamaika. Stewart dia 79 taona ary niaina tamin'ity fitsipika ity: "Rehefa manao zavatra tsara ianao dia ataovy mangina."
The Tambajotra fizahan-tany manerantany joMiaraka amin'ny fianakavian'i Stewart, ny fianakaviana Sandals, ary ny mponina ao Jamaika misaona ny fahafatesan'ny iray amin'ireo angano fizahan-tany any amin'ny faritra Karaiba ary mahery fo fizahantany. I Gordon "Butch" Stewart, 79 taona, no mpanorina ny Sandals Resorts.
Stewart dia nanomboka ny asany tamin'ny hevitra iray fotsiny ary namadika izany hevitra izany ho iray amin'ireo gadra mahomby ao amin'ny faritr'i Caribbean. Ny marika Sandals dia fantatra amin'ny kalitao, ny tantaram-pitiavana ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa be fiahy sy miavaka. Izy no mpanorina, tompona ary filohan'ny Sandals Resorts, Beaches Resorts, ary ilay orinasan-dry zareo Sandals Resorts International.
Stewart dia nahita fahitana. Naharitra ihany koa izy. Na inona na inona olana na fanamby natrehin'i Butch Stewart dia nifanandrina taminy tamin'ny fahatsapana tanjona mangina sy finiavana etika. Izy dia nanana ny fahitana mialoha mba hampifangaro ny fahafaha-manaon'ny fananana rehetra miaraka amin'ny zava-manitra mifankatia, ary amin'izany dia tsy vitan'ny iray amin'ireo mpandraharaha malaza any Karaiba fa mariky ny fahombiazana am-pahamendrehana, asa mafy ary fahamarinana ho an'ny Karaiba iray manontolo faritra.
Niaina sy namolavola ny ho avin'i Karaiba i Butch. Tamin'ny volana aprily, zanakalahin'i Gorden Butch, Adam Stewart, dia nilaza momba ny ray aman-dreniny:
Ny ray aman-dreniko roa dia avy amin'ny taranaka iray izay miteny hoe: “Rehefa manao zavatra tsara ianao dia ataovy mangina.”
Ny zavatra hitanao ao amin'ny Resort Sandals dia any ivelany koa. Beauty. Fanantenana. Fankasitrahana. Nefa betsaka kokoa ny “any ivelany”.
Ny Hon. Gordon "Butch" Stewart sy ny filoha lefitra, Adam Stewart dia manaiky ny mari-pankasitrahana lehibe tamin'ny taona faha-27 nisesy
Ohatra, Nosakanan'i Dada ny andro vitsivitsy tao amin'ny Resort Beaches ary mitondra zotram-batisan'ny ankizy avy amin'ny faritra ambany karama mba hankafy fialan-tsasatra kely sy hianatra momba ny fizahantany - mbola ataony izany. Nomeny ny sarany azony tamin'ny naha filohan'ny Fikambanan'ny Hotely ho an'ny mpanjono. Ny mpamily tsy miankina ihany no hakanany mpamily tsy miankina amin'ny seranam-piaramanidina, mba hanome asa ny toeram-pialan-tsasatra fa tsy ny hitondra azy ireo. Vao tsy ela akory no fantatry ny olona fa ny 96 isan-jaton'ny vokatra any amin'ny trano fisakafoanana dia avy amin'ny tantsaha eo an-toerana. Ireo no karazana fanapahan-kevitry ny orinasa nataony hatrany hanohanana ireo olona mila izany.
Hoy i Adam tamin'ny volana aprily: “Afaka nandeha foana aho, fa tsy tian'i Dada.”
Mpitondra fandraisam-bahiny Karaiba sy ny zanaka lahy ary ny mpanao asa soa, Gordon "Butch" Stewart, filoha & mpanorina ny Sandals Resorts International (SRI), ary Adam Stewart, filoha lefitry ny SRI, dia nanao ny andraikiny manokana sy ara-tsosialy orinasa hamolavola ny fiainana sy ny ho avin'i Karaiba ho an'ny 40 taona mahery.
Nanazava i Adam hoe: “Nanampy olona teo amin'ny laharana voalohany i Neny nandritra ny am-polony taona maro. Te-ho mpandraharaha mendri-kaja i Dada. Nijanona tany Jamaika izy mba hanangana orinasa tamin'ny fotoana nialan'ny olona ho any amin'ny toerana ahazoana vola bebe kokoa, haingana kokoa. Nahazo fitokisana sy tsy fivadihana izy. Izany no mahatonga ny olona ao amin'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra rehetra mahalala ny Sandal tsy hoe fialan-tsasatra fotsiny, fa toy ny olona maniry fatratra hanao soa. “
Maty tao Miami, Florida any Etazonia i Stewart, tamin'ny 4 Janoary 2021 tamin'ny faha-79 taonany. Narary tamin'ny aretina tsy fantatra izy. Hisy ny fandevenana manokana.
Ny World Network Network ary eTurboNewmankalaza ny fiainan'i Butch Stewart. Mampiseho izy fa ireo orinasa madinidinika izay mitady hevitra amin'ny fahazotoana, asa mafy ary fahitana dia mety ho lasa mpitarika indostrian'ny fizahantany.